Kerio Winroute Firewall Software လိုချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
Kerio Winroute Firewall Software လိုချင်လို့ပါ
September 2008 edited January 2010 in Networking
Kerio Winroute Firewall ရဲ့ setting လုပ်ပုံ လေး ကောသိချင်ပါတယ်....
အဲ့ဒီ Kerio Winroute Firewall... Setting အကြောင်းကတော့ ဟုတ်ပါပြီး။ စမ်းကြည့်လို့ မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုမရတာလဲ။ Network Card နှစ်ကဒ်ထားပေးရတယ်နော်။ တစ်ကဒ်က External DSL, Broad band and other internet connection. ရယ်။ နောက်တစ်ကဒ်က Internal ပါ။
For Example for External
That IP address 10.254.xxx.xx
sub net 255.255.xxx.xx
Default gateway 10.254.xxx.xx
(အဲ့ဒါတွေက ပုဂံကပေးတဲ့ IP Range တွေပါ)
That IP address 192.168.xxx.x
Default gateway မလိုပါ။
အဲ့ဒီလိုထားပြီးမှ Kerio Winroute မှာ Routing Table လား။ NAT လားသေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။
အဲ့ဒီမှာ ခုနပေးထားတဲ့ External ကို Right Click -- Properties မှာ NAT လုပ်မယ်။ အမှန်ခြစ် ကလေးခြစ်ပေးပါ။ နှစ်ခုစလုံးပေ့ါ။ အပေါ်မှာတစ်ခု အောက်မှာတစ်ခုရှိပါတယ်။
Internal ကို Right Click -- Properties မှာ အပေါ်ကအမှန်ခြစ်ကလေး ရွေးပေးပါ။ သူက တော့တစ်ခုတည်းပါ။
သေချာမမှတ်မိတော့လို့ ဒီလောက်ပဲပြောပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။
ကျတော်သုံးနေတာက MPT Line ပါ။
172.24.0.3 & 203.81.72.200 ကို ping တာတော. reply ပြန်လာတယ်။
but web page မကျဘူးဗျ။
ကျတော်က computer 10 လုံးသုံးချင်လို့။
်Full version software လဲလိုချင်ပါတယ်
ကျတော်ဟာက 30 Days ဘဲရတယ်။
webproxy သုံးချင်တာလား။ NAT သုံးချင်တာလား
NAT သုံးမယ်ဆိုရင် firewall rule မှာ rule ထည့်ပေးရတယ်။
mg walone wrote: »
MZ နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ဗျာ.......:D
webproxy သုံးချင်တာပါ.. အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါဗျာ..
ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ် Full Version လိုချင်ပေးမယ် [email protected] ကိုမေးလ်ပို့ ပေးထားလိုက်ပါ လိပ်စာကို